Tsipy kanetibe Analamanga : hatao amin’ny 8 sy 9 avrily ny «Champion’s league» | NewsMada
Tsipy kanetibe Analamanga : hatao amin’ny 8 sy 9 avrily ny «Champion’s league»
Hiavaka ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga, taranja tsipy kanetibe, amin’ity taona 2017 ity. Nomena ny anarana hoe : «Champion’s league» mantsy ny fifaninanana, izay hotanterahina etsy amin’ny kianja CBT Mahamasina, ny asabotsy 8 sy ny alahady 9 avrily ho avy izao.
Nambaran’i Mbolanamana, filohan’ny ligy, fa tsapan’izy ireo fa be dia be ireo mpilalao tsipy kanetibe, any amin’ny faritra samihafa any manana ny talentany, nandritra ilay hetsika vola iray sobika iny, ka mendrika ny ho hita ao anaty ekipa amin’izay. Ity izany ny fotoana hampirisihan’ny ligin’Analamanga azy ireo, hitady klioba hilalaovany fa tsy hijanona ho fialamboly fotsiny intsony.
Araka izany, nosokafana ho an’ny daholobe ny fifaninanana. Hisy ny fifaninanana, hiadiana ny ho tompondakan’ny ligy, natokana ho an’olon-telo miaraka na ny «Elite». 30.000 Ar ny saran’ny fisoratana anarana. Hahazo lelavola 600.000 Ar izay voalohany amin’io. Ankoatra izay, hisy koa ny lalao olon-telo miaraka saingy natokana ho an’ireo olona vao mianatra tsipy kanetibe “amateur”. 15.000 Ar ny fandraisana anjaran’izy ireo ary 500.000 Ar ny lokan’ny voalohany. Hisy koa ny fiadiana ny ho tompondaka ho an’ny zokiolona “vétéran”, izay natao ho 20.000 Ar ny sarany ka hahazo 300.000 Ar ny ho tompondaka. Natao ho lalao an’olon-droa kosa ny an’ny vehivavy sy ny sokajy tanora tamin’ity.